ENCO IBC2019 မှာတိမ်တိုက်-အခြေပြုရေဒီယို Automation ဘေးအန္တရာယ်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဖြေရှင်းချက်မိတ်ဆက်ဖို့ - NAB Show ကိုသတင်းထုတ်လွှင့် Beat အသုံးပြုပုံ NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့် - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်
Home » သတင်း » IBC2019 မှာ cloud-based ရေဒီယို Automation ဘေးအန္တရာယ်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဖြေရှင်းချက်မိတ်ဆက်ဖို့ ENCO
IBC2019 မှာ cloud-based ရေဒီယို Automation ဘေးအန္တရာယ်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဖြေရှင်းချက်မိတ်ဆက်ဖို့ ENCO
နယူးဖေ-DR On-ဝေဟင်ကြားဖြတ် minimize နှင့်ကြော်ငြာဝင်ငွေကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ဘူတာရုံရဲ့ဒေသဆိုင်ရာအလိုအလျောက်နှင့်ပလေးအောက်ကိုစနစ်၏အပြည့်အဝ-ညှိ, ဆင်သင့်-to-run ကို backup လုပ်ထားပေးသည်
Southfield, MI စက်တင်ဘာလ 5, 2019 - ENCO ယနေ့အဖေဘေးအန္တရာယ်ပြန်လည်ထူထောင်ရေး (အဖေ-DR), ကုမ္ပဏီရဲ့ကျော်ကြားဖို့ cloud-based အဖော်ထုတ်ပြန်ကြေညာ အဘ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်သို့မဟုတ်အရေးပါနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာပျက်ကွက်၏အမှု၌တခဏရဲ့အသိပေးစာအပေါ်အစီအစဉ်နှင့်ကြော်ငြာပလေးအောက်ကိုကျော်ယူဖို့အဆင်သင့်ကြောင်းရေဒီယိုအလိုအလျောက်စနစ်။ On-ဝုဏ်အဖေဖြန့်ကျက်သည့်ထုတ်လွှင့်မယ့်တစ်ဦးအပြည့်အဝ-featured ကိုယ်ပွားများကိုအဖေ-DR ကြောင်း backup လုပ်ထားအကြောင်းအရာ up to date ဖြစ်နေအပေါင်းတို့နှင့်တကွစီစဉ်ထားကြော်ငြာအစက်အပြောက်ကို run ပါလိမ့်မယ်ဆိုတာပါပဲသေချာစေရန်ဒေသခံဖေ system ပေါ်တွင်လုပ်အပြောင်းအလဲများနှင့်အတူအစဉ်အမြဲထပ်တူအတွက်ရှိနေမည်။ အဖေ-DR ရပ်တည်ချက် 2019.A8 အတွက် IBC59 မှာယင်း၏ကမ္ဘာကြီးပြပွဲပွဲဦးထွက်စေမည်။
"ထုတ်လွှင့်ခြိမ်းခြောက်ကြောင်းဘေးအန္တရာယ် '' On-ဝေဟင်စစ်ဆင်ရေးကဲ့သို့သောရာသီဥတု-related ဖြစ်ရပ်များအဖြစ်သဘာဝအလျောက်ဖြစ်ပေါ်ဖို့ကန့်သတ်ထားပေမယ့်လည်းပါဝါပြတ်တောက်, ပစ်မှတ်ထားဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုများ, ကွန်ပျူတာဗိုင်းရပ်စ်များနှင့်ပင်ပစ္စည်းကိရိယာများပျက်ကွက်မပါဝင်နေကြတယ်" ဟုကဲန် Frommert ၏နိုင်ငံတော်သမ္မတကပြောပါတယ် ENCO ။ "ဟုပြည့်စုံထားရှိခြင်း, ကို up-to-date ဖြစ်အောင်ဘေးဥပဒ်ကိုပြန်လည်နာလန်ထူဖြေရှင်းချက်လေထုအပေါ်ဘူတာစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်၎င်းတို့၏ကြော်ငြာဝင်ငွေကာကွယ်ဘို့မရှိမဖြစ်အရေးပါသည်။ ကျနော်တို့ဆီမှာစိတ်ကြိုက်, တစ်ဦးချင်းအခြေခံပေါ်မှာအချို့သောဘူတာအဘို့မိုဃ်းတိမ်ကို-based အမှားသည်းခံစိတ်ချထားကြပါပြီ, သောငါတို့ဖောက်သည်များ၏လူအပေါင်းတို့အားပူဇော်ရန်အဘို့အ backup လုပ်ထားနှင့်ဘေးဥပဒ်ကိုပြန်လည်နာလန်ထူဘို့မိုဃ်းတိမ်ကို အသုံးပြု. အတွက် ပို. ပို. ယုံကြည်စိတ်ချရဒေီယိုလုပ်ငန်းများနှင့်တကွ, အချိန်မှန်သည် တစ်ဦးထုပ်ပိုးဖြေရှင်းချက်။ "
အဖေ-DR, ENCO ရဲ့ browser ကို-based မိုဘိုင်း control interface ကိုအတူချောမွေ့စွာအလုပ်လုပ်တယ် WebDADအသုံးပြုသူများကိုအဝေးမှ, ဖွင့်စာရင်းများကိုကို update အသစ်သောအကြောင်းအရာ, အသံလမ်းကြောင်းရှိုး add နှင့်စာကြည့်တိုက်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလုပ်ဆောင်ရန်ခွင့်ပြု - ဘူတာရုံလုံးဝကော်မရှင်ထဲကပင်လျှင်။ ဘူတာရုံ၏အဓိကအဖေ system ထဲကနေကိုမိုဃ်းတိမ် backup လုပ်ထားရန်အကူးအပြောင်းဖောက်သည်သူတို့လူတစ်ဦးအတွက်စတူဒီယိုမှမရနိုငျပါလျှင်ပင်အဖေ-DR ကူးပြောင်းနိုင်ကြသည်သေချာတစ်ဦးကို web browser ကနေအလိုအလျောက်သို့မဟုတ်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။
မိုဃ်းတိမ်၌အပြည့်အဝ-ညှိ backup လုပ်ထားအလိုအလျောက်နှင့်ပလေးအောက်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများရုံမမျှော်လင့်ဘဲလုပ်ငန်းလည်ပတ်ကြားဖြတ်ကိုင်တွယ်ကျော်လွန်တိုးချဲ့။ On-ဝုဏ်အတွင်းအဆင့်မြှင့်ဖျော်ဖြေဘူတာ On-ဝေဟင်သက်ရောက်မှုမဆိုစွန့်စားမှုပပျောက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကာလအတွင်း၎င်းတို့၏ cloud-based backup လုပ်ထားရန်ကျော်ပြောင်းနိုင်သည်အဖြစ်ဖေ-DR ကိုလည်းလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်စနစ်များကိုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလျော့နည်းနှောင့်အယှက်စေသည်။ "ဒါကအဖေ-DR ၏အသုံးအများဆုံးအသုံးပြုမှုဖြစ်ခြင်းတက်အဆုံးသတ်စေခြင်းငှါ," Frommert ကဆက်ပြောသည်။ အမှန်တကယ် '' သဘာဝဘေးအန္တရာယ် '' စီးပွားရေးလုပ်ငန်းထိခိုက်မှု၏အကြီးမားဆုံးသောအန္တရာယ်ရှိစေခြင်းငှါနေစဉ် "သူတို့ကံကောင်းထောက်မစွာအတော်လေးအနည်းငယ်ဖြစ်ကြပြီးယခုအချိန်အထိအကြား။ ဆနျ့ကငျြ, ဘူတာမကြာခဏသူတို့ရဲ့စနစ်တွေ, ဆော့ဖ်ဝဲသို့မဟုတ်အခြေခံအဆောက်အအုံမွမ်းမံနှင့်အဆင်သင့်မှာအဖေ-DR ရှိခြင်းသူတို့ကိုမဆိုကျချိန်ကိုရှောင်ကြဉ်ကူညီပေးသည်။ Plus အား, အဖေ-DR အတူထုတ်လွှင့်သူတို့၏တန်ဖိုးရှိသောပိုင်ဆိုင်မှုအားလုံး၏တစ်ဦးအဆက်မပြတ် updated, ပြင်ပ backup လုပ်ထားရှိသည်။ "
အဆိုပါကြေးပေးသွင်း-based ဖေ-DR ဝန်ဆောင်မှု ENCO မိတ်ဖက် StreamGuys '' ထုတ်လွှင့်တန်းသောမိုဃ်းတိမ်ကိုအခြေခံအဆောက်အဦများအပေါ်တည်ခင်းဧည်လိမ့်မည်။ StreamGuys '' သက်သေအခြေခံအဆောက်အအုံအထူးသက cloud အခြေခံဘေးအန္တရာယ်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးများအတွက်စံပြပလက်ဖောင်းအောင်, ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်ပရီမီယံမီဒီယာအဖွဲ့အစည်းများ၏ 24 /7ယုံကြည်စိတ်ချရနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ built နှင့် optimized ခဲ့သည်။ မေတ္တာရပ်ခံသို့မဟုတ်ဖောက်သည်များကလိုအပ်လျှင်အဖေ-DR အခြားလူကြိုက်များသည်မိုဃ်းတိမ်ပလက်ဖောင်းများပေါ်တွင်အသုံးချနိုင်ပါသည်။
အဖေ-DR ချက်ချင်းမရရှိနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါ IBC2019 ညီလာခံနှင့်ပြပွဲအမ်စတာဒမ်အတွက်စက်တင်ဘာလ 13 ထံမှ 17 ဖို့ရာအရပျယူပါလိမ့်မယ်။
1983 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, ENCO ရေဒီယိုဘူတာရုံနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားစတူဒီယိုများအတွက်ကွန်ပျူတာ-based, ဒစ်ဂျစ်တယ်အသံများနှင့်အစီအစဉ်ကိုအလိုအလျောက်၏အသုံးပြုမှုကိုရှေ့ဆောင်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီကတည်းကပိတ်ထား-စာတန်းထိုး, အမြင်အာရုံရေဒီယို, အသံလိုက်နာမှု, ချက်ချင်းမီဒီယာပလေးအောက်, ဝေးလံသောအလှူငွေနှင့် cloud-based ကို web streaming များအပါအဝင်ဒီနေ့ရဲ့ automated ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှု Workflows အပေါငျးတို့သရှုထောင့်, ဖြတ်ကူးရန်၎င်း၏ထုတ်ကုန်လိုင်းပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ၎င်း၏နှစ်ခုစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်စနစ်များ, အဖေနဲ့အမေ, ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း automated ရေဒီယိုနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားစစ်ဆင်ရေးဖို့စက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့အကောင်းဆုံးယုံကြည်စိတ်ချရ, ကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်မှုနှင့်ထိုးထွင်းသိမြင်စစ်ဆင်ရေးဆောင်ခဲ့ရမည်။ ENCO Southfield, မစ်ရှီဂန် USA တွင်ရုံးချုပ်နှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဖြန့်ဖြူးကွန်ယက်ပေါင်းဖြည့်စွတ်စက်မှုလုပ်ငန်းရောင်းချသူနှင့်အတူမိတ်ဖက်တစ်ကြီးထွားလာကွန်ယက်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားသည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက, သွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး: www.enco.com.
MultiDyne ရယူသန်းခေါင်စာရင်းဒစ်ဂျစ်တယ် - စက်တင်ဘာလ 13, 2019
အိုင်ပီကွန်ယက်အဖွဲ့ကျော် uncompressed အသံမှ GatesAir ကူးအပြောင်းကာလ MediaWorks နယူးဇီလန် - စက်တင်ဘာလ 6, 2019
IBC2110 များအတွက်အပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါ SMPTE ST 2019 Solutions ၏ Macnica Accelerator ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ - စက်တင်ဘာလ 6, 2019
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ဘော့ကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာ အထောက်အပံ့ ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor လှံ & Arrows TVU ကွန်ယက် က Ultra HD ဖိုရမ် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ်	2019-09-05
ယခင်: NextRadioTV Dalet နှင့်အတူ၎င်း၏ဒစ်ဂျစ်တယ်ေူပာင်းလဲရေးကိုနှင့်ကွန်ယက်ချဲ့ accelerates
နောက်တစ်ခု: ကို Creative မင်္ဂလာဆောင်ဗီဒီယို Editor ကို